သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကို Morse Code Translator သို့မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုနဲ့ပြန်လာတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သင့်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး Morse code သို့ရေးထားသောဘာသာစကားမှဘာသာပြန်တစ်မျိုးမျိုးကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ထုံးစံအတိုင်း၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းတစ်ခုထက် ကျော်လွန်၍ မသွားနိုင်ပါ breadboard ပန်းကန် နှင့် arduino ဘုတ်အဖွဲ့ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်အနေဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်နှင့်နောက်ဆုံးစီမံကိန်းပြီးဆုံးခြင်းများအရရှေ့ဆက်သွားလိုပါကအဖြေတစ်ခုအားအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သင့်သည်၊
အကြံဥာဏ်ကိုဖန်တီးရန်စတင်သည် morse code သို့မည်သည့်စာလုံး၊။ ၎င်းသည် Arduino ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်များပါရှိလိမ့်မည်၊ သို့မှသာ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနေသော Morse ဘာသာစကား၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အညီ LEDs အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ဘာသာပြန်ချင်တဲ့စာသားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် Android operating system တပ်ဆင်ထားတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသုံးပြီးဘုတ်ကို Bluetooth ချိတ်ဆက်ပြီးဘုတ်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ Arduino UNO.
3 Arduino ဘုတ်နှင့်ကွန်ပျူတာအကြားချိတ်ဆက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့အထက်သို့မဟုတ်အထက်ဖော်ပြရန်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်ဤစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာကြီးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကတိကျသောပစ္စည်းများလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်သူ, သင်ရှိသည်မရှိလျှင်သင်၏အများဆုံးမကြာခဏစတိုးဆိုင်များတွင်မဆိုပျောက်ဆုံးနေသည်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေရန်သင်တို့အဘို့အခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာပါတယ်, ငါဆိုသည်ကား, များသောအားဖြင့်များမှာ မျှမျှတတမကြာခဏအသုံးပြုပစ္စည်းများ။ အထူးသဖြင့်အောက်ပါစာရင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။
Arduino အတွက် Bluetooth
LED မီး ၄ လုံး၊ တူညီသောအရောင် ၃ ခုနှင့်မတူသောအရောင်စတုတ္ထအလင်း
Device များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် cable များစွာနှင့်ဤကိစ္စတွင် breadboard နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Arduino controller ကိုချိတ်ဆက်ရန်
ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက် Ardunio ကို USB input တစ်ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်
Talking ဦး ချို
Arduino IDE ပါသောကွန်ပျူတာမှန်ကန်စွာ install လုပ်ပြီး ဘုတ်ကိုချိတ်ဆက်ရန် USB ဆက်သွယ်မှု
operating system နှင့်အတူမိုဘိုင်း device ကို Android 2.2.1 နှင့်အထက်
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လိုအပ်သောအရာအားလုံးရရှိပြီးသည်နှင့်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စိတ်ကိုထားရန်အချက်တစ်ချက်စာသားဖြစ်ပါတယ် ဤစီမံကိန်းသို့မဟုတ်ကဒ်တွင်အသုံးပြုသည့် bluetooth adapter ရှိရန်မလိုအပ်ပါ Arduino UNO အခြေခံဆက်သွယ်မှုများနှင့်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အသုံးပြုသောဆက်သွယ်မှုများကိုသာအာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ Arduino UNO ၎င်းသည်သင်အသုံးပြုနေသောဘုတ်၏တူညီသောရလဒ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဤစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားစုစည်းခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအဆင့်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားမှန်ကန်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။ ဤစီမံကိန်းအမျိုးအစားတွင်မကြာခဏဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့လွတ်လပ်စွာခံစားခွင့်ရှိသည် မည်သည့်ကုဒ်မျဉ်းကြောင်းကိုမဆိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် hardware ထည့်ပါ တိုးတက်မှုမဆိုအမျိုးအစားကိုအမြဲကြိုဆိုပါတယ်ကတည်းက။
ပထမ ဦး ဆုံးဌာန၌ငါတို့ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် ဆက်စပ်မှု Arduino UNO ကျွန်တော်တို့ရဲ့ breadboard အတူ။ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသော output များသည် GND နှင့် 3.3 V. ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤတူညီသောလိုင်းများသည်အခြားအရာများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Bluetooth adapter ကိုပါထောက်ပံ့ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဤဆက်သွယ်မှုများကိုပြုလုပ်ပြီးပါက Bluetooth adapter ၏ဒေတာထည့်သွင်းမှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုကို Arduino ဘုတ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်ထည့်သွင်းမှုနှင့်အကျိုးရလဒ်များနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် adapter ကိုကဒ်ပြားနှင့်အပြည့်အဝချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်းသည်လက်ရှိအားလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စတင်နိုင်ရန်အတွက်နည်းပညာအဆင့်တွင်လုံးဝရနိုင်သည်။ 'ကြား'၏ဝင်ပေါက်၏ဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့်ရောက်ရှိသောဒေတာ Arduino UNO။ အသေးစိတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အချို့သောအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကဒ်နှင့် Bluetooth adapter ကြောင့်အသုံးပြုသောဆက်သွယ်မှုများသည်ကွဲပြားနိုင်ပြီး၊ ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအချက်မှာ adapter installation documents တွေကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့် connection diagram တွေပါလာတယ်.
ငါတို့ရောက်လာတယ်3ဗို့ချိုကိုဆက်သွယ်မှု။ ဒီအတွက်ဒီဂျစ်တယ် output နံပါတ် ၁၃ ကိုသုံးပါမယ် Arduino UNO။ ကျန်ရှိသောဆက်နွယ်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် GND သို့မဟုတ် ground သို့ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ horn ၏လည်ပတ်မှုမှန်ကန်မှုရှိသည်။
ယခုအချိန်ရောက်လာပြီ ကွဲပြားခြားနားသော LEDs ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်စေရန်၊ စိတ်ကူးက၎င်းရဲ့အရှည်ဆုံးအရှည်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောပါ။ Arduino UNO တိုတောင်းတ ဦး တည်း GND သို့မဟုတ်မြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေစဉ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိမ်းရောင် LEDs ၏ပထမ ဦး ဆုံးသည် digital output သို့ 12 နှင့် output ကို 8 နောက်တွင်၊ တတိယအစိမ်းရောင် LED ကို output7သို့ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်ခုတည်းသောအပြာရောင် LED သည် output4ကိုချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ wiring တွေအားလုံးကိုအဆင်သင့်လုပ်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ချိတ်ဆက်ရန် USB connection cable ကိုသုံးပါ Arduino UNO ကွန်ပျူတာကို ထို့ကြောင့် Arduino IDE မှရေးသားပြီးစုဆောင်းမည့်လိုအပ်သည့် software များဖြင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်ဘုတ်ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာအနည်းဆုံးမူအရဘုတ်တွင်ရှိသည် ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်နေသမျှကာလပတ်လုံးအမြဲတမ်းမီးစိမ်းနေပါလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော Bluetooth adapter ပေါ် မူတည်၍၊ များသောအားဖြင့် Android device နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့်အနီရောင်မီးလင်းနေသည် အက္ခရာတွေ၊ စကားစုတွေ၊ စကားလုံးတွေကိုပန်းကန်ထဲကိုပို့ဖို့ငါတို့သုံးလိမ့်မယ်။
အထက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အလွန်ထူးခြားသည်ဟုထင်ရသည်။tonto'' ဒါပေမဲ့ထုတ်လုပ်သူအသိုင်းအ ၀ ိုင်းထဲမှာသူတို့တည်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ဟာအလွန်ခိုင်လုံတဲ့၊ လိုအပ်တဲ့၊ အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာများဖြစ်ကြောင်းငါပြောနိုင်တယ်။ စတင်နေပြီလူ ပြီးတော့ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် 'လှည့်ကွက်'အနည်းဆုံးတော့၊ ဒီ adapter နဲ့ board ကိုရောက်နေပြီဆိုတာသူတို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်လွှာကိုသာ download ပြုလုပ်ရပါမည် MORSE.apk ပူးတွဲ။ ဒီအပလီကေးရှင်းကို Android operating system တပ်ဆင်ထားတဲ့သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ install လုပ်ထားရမယ်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုလျှင်သင်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ပြီးရှေ့ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ 'စာသားပို့ပါ', ငါတို့ကဝင်ရောက်ဖို့ကိုနှိပ်ပါရန်ရှိသည်သောတူညီသော။ အတွင်းထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်မှုအားတည်ဆောက်ရန် 'Connect' ကိုနှိပ်ပါ။
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်း encoding လုပ်ငန်းစဉ်သည်။
သင်သည်သင်၏ Android ကိရိယာရှိလျှောက်လွှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးယခင်အဆင့်များအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါကမည်သည့်စာလုံး၊ စကားလုံးသို့မဟုတ်စကားစုကိုမဆိုသင်ရေးသားနိုင်လိမ့်မည်။ သင်လိုချင်တာကိုရေးပြီးတာနဲ့ send ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အယူအဆမှာပထမအချက်သည် 'အမှတ်' ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မီးစဖွင့်ပြီးပိတ်လိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဦး ချိုသည်မြည်။ တချိန်တည်းတွင်ပိတ်လိမ့်မည်။
ဒုတိယနှင့်တတိယစိမ်းလန်းသောမီးအိမ်များသည်“ လိုင်း” ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလှည့်အပိတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ယခင်အဖြစ်အပျက်ကကဲ့သို့ပင် ဦး ချိုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖွင့်ပြီးပိတ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စတုတ္ထအလင်း - အပြာရောင်မီးသည်အက္ခရာ၊ စကားလုံးသို့မဟုတ်စကားစု၏အဆုံးကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဖွင့်နှင့်ပိတ်လိမ့်မည်။ အက္ခရာ၊ စကားလုံး (သို့) စကားစုတစ်ခုချင်းစီအကြားနေရာလွတ်အချို့ရှိလျှင်ဤအလင်းသည်နှစ်ကြိမ်ဖွင့်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များအရ၊ ဤကိစ္စတွင် Android Inventor ကို App Inventor မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကုဒ်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်လည်ပတ်မှုတပ်ဆင်ထားသောကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင်လည်ပတ်လိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ်အင်ဂျင်နီယာများမှဖန်တီးသည့်စနစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » morse code translator သို့သင့်ဘာသာစကားကိုဖန်တီးပါ